Raiso ny sabatrao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Alao ny sabatrao!
... Ny sabatry ny Fanahy, dia ny tenin’Andriamanitra ( Efesiana 6:17 ).
Tamin'ny andron'ny Apôstôly Paoly, ny miaramila Romana dia nanana sabatra roa farafahakeliny roa. Antsoina hoe Rhomphaia. Mirefy 180 ka hatramin'ny 240 sm ny halavany ary ampiasaina hanapahana ny tongotra sy ny lohan'ny miaramila fahavalo. Noho ny habeny sy ny lanjany dia voatery notazonina ny tanana roa. Izany dia tsy nahafahan'ny miaramila nampiasa ampinga tamin'io fotoana io, namela azy tsy niaro tamin'ny zana-tsipìka sy lefona.
Ilay karazana sabatra hafa dia nantsoina hoe Machaira. Sabatra fohy io. Maivana ary navelan'ny miaramila hikarakara izany haingana sy haingana. Mila tanana iray fotsiny ianao, izay nahafahan'ilay miaramila nitafy ampinga. Ity ilay sabatra faharoa faharoa izay notononin'i Paoly eto amin'ity taratasy ho an'ny Efesiana ity.
Ny sabatry ny fanahy, ny tenin'Andriamanitra, no fitaovam-piadiana ara-panahy mahatalanjon'ny fiadian'Andriamanitra, ny hafa rehetra dia ampiasaina miaro tena. Izy io dia afaka miaro antsika amin'ny tsipoitra avy amin'ny fahavalo raha toa ka miodina amin'ny ilany ny bela. Fa io ihany no karazana fitaovam-piadiana izay mitazona sy mandresy ny fahavalontsika, fa i Satana farany.
Ny fanontaniana dia hoe, ahoana no ahafahantsika mampihatra an'io sabatra io eo amin'ny fiainantsika? Ireto misy fitsipika manan-danja momba ny Tenin'Andriamanitra izay azontsika ampiharina:
Henoy mavitrika amin'ny toriteny momba ny Tenin'Andriamanitra. - Manatona tsy tapaka ny fiangonana handre ny tenin Andriamanitra nanazava.
Vakio ny Tenin'Andriamanitra - makà fotoana hamakiana ny Baiboly mba hahatakarana ny hafatra rehetra.
Halalino ny Tenin'Andriamanitra - mandia lalina kokoa noho ny famakiana ny soratra masina fotsiny. Manombatombaho ​​ny hevitry ny mpandray voalohany ary ampitahao amin'ny fomba ahafahanao mampiasa ny Tenin'Andriamanitra ankehitriny.
Saintsaino ny Tenin’Andriamanitra - eritrereto izay novakianao, dia hofotoroo ary eritrereto izay novakianao. Raha atao teny hafa dia avelao ny fanahinao sy ny fonao hanaiky ny Tenin 'Andriamanitra.
Tsarovy ny Tenin 'Andriamanitra. Arakaraka ny itandremantsika ao am-pontsika ny Tenin 'Andriamanitra no tsy hihoirantsika fa hiala amin'ny làlana tsara isika. Rehefa miatrika toe-javatra sy miezaka manaram-po amin'ny nofo sy ny tontolo manodidina antsika isika dia tokony hiomana amin'ny tolona ara-panahy. Ny Tenin Andriamanitra dia tokony hiasa ao anatinao ary ho vonona hitarika ny eritreritrao amin'ny fahatapahan-kevitra.
Hodinoo ny Tenin'ANDRIAMANITRA - miomàna ary afaka mamaly isaky ny misy sy izay ilaina rehetra.
Ireo zavatra rehetra ireo mifandraika amin'ny Tenin'Andriamanitra dia tsy fahalalana fotsiny ho an'ny fahalalana. Izy io dia bebe kokoa momba ny fahazoana fahendrena, ny fahatakarana ny fomba ampiharina ny Baiboly mba hahafahantsika mampiasa tsara io fitaovam-piadiana io. Tokony havelantsika ho voan'ny sabatry ny fanahy isika, hahalala ny fampiasana an'io fiadiana io, ary hikatsaka ny fitarihan'Andriamanitra foana. Mangataka fahendrena izay tsy ampy fahendrena isika. Tsy te hanao tsinontsinona ny tenin Andriamanitra isika, raha tsy izany, ho sabatra amin'ny fahavalontsika ny sabatrao. Raha mampiasa ny fitaovam-piadiana, sabatra, izay nomen'ny Tompo antsika dia mety handresy amin'ity ady ara-panahy ity isika.
Ray ô, efa nanome anay ny teninao ho loharano tsy azo resena izahay. Enga anie ho feno azy ny fiainantsika. Ampio izahay hanaiky ny teninao matetika. Avelao izahay hampiasa ny teninao amin'ny fomba mahomby sy hendry amin'ny ady ara-panahy atrehintsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, amena.